Kobaca 371% VS 70% Hoos u dhac! Tartanka Suuqa Musqusha oo Dhan Miyuu Gaaray Marxaladda "Kulayl Cad"? Kobaca 371% VS 70% Hoos u dhac! Tartanka Suuqa Musqusha oo Dhan Miyuu Gaaray Marxaladda "Cad kulul"?
Bogga ugu weyn / blog / Kobaca 371% VS 70% Hoos u dhac! Tartanka Suuqa Musqusha oo Dhan Miyuu Gaaray Marxaladda “Cad -kulul”?
Kobaca 371% VS 70% Hoos u dhac! Tartanka Suuqa Musqusha oo Dhan Miyuu Gaaray Marxaladda “Cad -kulul”?
2021 / 09 / 13 Qoondayntablog 1617 0
Cinwaanada Jikada & Musqusha
Dhawaan, laba shirkadood oo la xiriira musqusha oo dhan (oo sidoo kale loo yaqaan musqusha oo dhan ama musqusha la soo ururiyey) - musqusha Huida iyo Seagull Sumitomo ayaa soo saaray natiijooyinkoodii maaliyadeed ee ugu dambeeyay. Waxay siday u kala horreeyaan u soo bandhigeen xogta dakhliga qaybta qeybtii hore ee 2021 -ka. Dakhliga bakhaarka nadaafadda ee Huida musqusha oo dhan ayaa kordhay 370.95%, halka dakhliga Seagull Sumitomo alaabooyinka la midka ah uu hoos u dhacay 69.63%. Hay'adaha qaarkood waxay saadaalinayaan in marka la gaaro 2025 -ka cabbirka suuqa musqusha oo dhan uu gaari doono 16.5 bilyan oo yuan. Ballaarinta sii socota ee suuqa ayaa soo jiidatay shirkado badan iyo raasumaal inay soo galaan. Xogta dakhliga kala duwan ee meheraddu waxay astaan ​​u noqon kartaa tartanka suuqa musqusha oo dhan oo galay heer cad-kulul.
Dakhliga musqusha oo dhan Huida ayaa si weyn u kordhay 370.95%
Sida laga soo xigtay Huida musqusha warbixinteeda nus-sanadlaha ah, shirkaddu waxay kasbatay dakhli hawlgal ah oo ah 1.743 bilyan yuan qeybtii hore ee sanadka, koror ah 32.38%. Iyaga dhexdooda, dhammaan dakhliga hawlgalka musqusha wuxuu ahaa 55 milyan yuan, oo ah koror aad u weyn oo ah 370.95% isla muddadaa isla sanadkii la soo dhaafay, taasoo ka dhigan 3.18% dakhliga guud. Intaa waxaa dheer, iyada oo ah kanaal iib ah oo muhiim ah si loo taageero ganacsiga musqusha oo dhan, musqusha Huida qeybtii hore ee dakhliga kanaalka mashruuca wuxuu gaaray 421 milyan yuan, koror ah 23.52%.
Cutub: milyan yuan
Product Categories Dakhliga ka soo gala meheradda ugu weyn xilliga warbixinta Isbeddelka sannadka-sanadka Boqolleyda dakhliga ganacsiga ugu weyn
Dhoobada nadaafadda 89, 577. 08 23% 51%
Waxaa ka mid ah: agab nadaafadeed oo caqli badan 18,873. 43 102.24 10%
Agabka nadaafadda guud 5, 489. 53 370.95% 3%
Tile 23, 673. 07 54% 13%
musqusha 6, 233. 47 57% 3.61%
Qolka musqusha 13,097. 35 4 & 86% 7%
Alaabta Fayadhowrka ee Hardware 29,105. 53 39% 16%
Qaar kale waxay 11,164.69 21.28% 6%
Wadarta dakhliga ka soo gala meheradda weyn 172,851.19 32% 100.00%
Musqusha Huida ayaa korortay in ka badan 370% qeybtii hore ee dakhliga guud ee musqusha
Qolka musqusha oo dhan, Huida waxay dhawaan ku yeelatay dhowr falal oo muhiim ah. Fiidnimadii 3 -dii Ogosto, musqusha Huida waxay ku dhawaaqday in kororka raasamaalka ee aan la dhaafin 200 milyan yuan ee magaalada Beiliu, Shengda cusub ee Qalabka Cusub Co. Kaddib kordhinta raasamaalka, oo aan haynin wax ka yar 70% sinnaanta cusub Shengda. Maalgelinta musqusha Huida ee kiiskan sida iska cad ma aha oo kaliya inay kor u qaaddo wax soo saarka foornooyinka. Alaabta musqusha Huida waxaa ka mid ah nidaamyada foornada iyo nidaamyada SMC, iyo isticmaalka musqulaha guddi dhagaxa ayaa sidoo kale sii kordhaya. Kadib kororka raasamaalka, waxay haysaa wax aan ka yarayn 70% sinnaanta Shengda cusub. Maalgelinta musqusha Huida ee kiiskan sida iska cad ma aha oo kaliya inay kor u qaaddo wax soo saarka foornooyinka. Alaabta musqusha Huida waxaa ka mid ah nidaamyada foornada iyo nidaamyada SMC, iyo isticmaalka musqulaha guddi dhagaxa ayaa sidoo kale sii kordhaya. Korodhka raasumaalka ayaa sida iska cad sidoo kale ku habboon horumarinta musqusha Huida ee istaraatijiyadda shirkadda qaybta musqusha oo dhan.
Fikradda Huida musqusha oo dhan
Laga soo bilaabo kanaalka, sida laga soo xigtay warkii ay sii daayeen musqusha Huida 25 -kii Ogosto, shirkaddu waxay dhowaan ku guuleysatay dalabkii “Long Lake Group ee 2021 - 2023 sannadka oo ah taajka guryaha SMC nidaamka mashruuca ururinta musqusha oo dhan”. Waxaa lagu soo waramayaa inay ku lug leedahay mashruuca horumarinta guryaha ee guryaha kirada ah ee shirkadda guryaha ma -guurtada ah. Ka sokow aqalkii Longhuguan, Huida ayaa dhawaan sidoo kale saldhigtay saldhigga duulimaadka Sichuan, guriga dhise Xiongan, guriga Shijiazhuang Huangzhuang iyo mashaariic kale oo muhiim ah. Ka sokow aqalkii Longhuguan, Huida ayaa dhawaan sidoo kale saldhigtay saldhigga duulimaadka Sichuan, guriga dhise Xiongan, guriga Shijiazhuang Huangzhuang iyo mashaariic kale oo muhiim ah. Khariidadda kanaalka ee ku wareegsan musqusha oo dhan si guul leh ayaa loo fuliyaa.
Ogaysiiska dadweynaha ee ku guulaysiga musqusha Huida
Dakhliga Seagull Sumitomo ee badeecadaha la midka ah “yaraanshaha” oo ku dhow 70%
Dhinaca kale, Seagull Sumitomo ayaa sidoo kale soo saartay warbixinteedii nus-sannadka ahayd fiidnimadii Ogosto 24. Sida lagu sheegay warbixinta, qeybtii hore ee Seagull Sumitomo waxay heshay dakhli hawlgal oo ah 1.983 bilyan yuan, koror ah 50.17%. Iyaga dhexdooda, dakhliga qaybta musqusha oo dhan wuxuu ahaa 0.26 bilyan yuan, hoos u dhac 69.63% isla muddadaa isla sanadkii hore, taasoo u dhiganta kaliya 1.31% dakhliga guud qeybtii hore.
Xilliga warbixinta hadda Isla muddadii sannadkii hore Sannad-korodhku wuu kordhaa ama yaraadaa
Lacagta Saamiga dakhliga hawlgalka Lacagta Saamiga dakhliga hawlgalka
Alaabta qasabada qalabka 1,224,449,250.90 61.74% 852,088,803 」7 64.53% 43.70%
Alaabta guriga ee caqliga leh 82,137,189.36 4.14% 48,495,995.33 3.67% 69.37%
Alaabta dhoobada musqusha 105,274,145.70 5.31% 69,475,496.35 5.26% 51.53%
Musqusha oo dhamaystiran 26,034,399.59 1.31% 85,713,709.96 6.49% -69.63%
Armaajooyinka la habeeyay 131,197,274.24 6.62% 97,494,226.96 7.38% 34.57%
Qaar kale waxay 41,096,667.64 2.07% 33,121,472.05 2.51% 24.08%
Guriga 768,858,462.30 38.77% 549,233,106.69 41.59% 39.99%
Dibadda 1,214,286,582.34 61.23% 771,337,728.87 58.41% 57.43%
Seagull Sumitomo ayaa ku dhawaad ​​70% dhacday qeybtii hore ee dakhliga musqusha oo dhan
Qaab -dhismeedka firfircoon ee dhammaan musqusha Seagull sannadihii la soo dhaafay, hoos -u -dhaca dakhliga qaybta ayaa ahaa mid lama filaan ah. Waxaa la fahamsan yahay in Seagull Sumitomo uu bilaabay inuu ku daro warbixinta qaybta maaliyadeed ee dhammaan warbixinta qaybta maaliyadeed ee 2018. Saddexdii sano ee u dhexeysay 2018 illaa 2020, dakhliga qeybta wuxuu ahaa 0.68 bilyan yuan, 183 milyan yuan iyo 203 milyan yuan, siday u kala horreeyaan, korodh 100%, 170.22%iyo 11.02%. Qeybtii hore ee 2019, waxaa jiray koror dhan 382.51%. Intaa waxaa dheer, dhammaan dakhliga qaybta musqusha ayaa lagu xisaabiyey 3.05% wadarta dakhliga sannadka 2018, illaa 6.09% sannadka 2020.
(Iyada oo ku saleysan xogta warbixinta maaliyadeed ee Seagull Sumitomo)
Laga bilaabo qeybtii hore ee 2020, dakhliga Seagull Sumitomo ee qeybta musqusha oo dhan ayaa hoos u dhacay, isagoo hoos u dhacay 7.91% xilligaan. Qeybtii hore ee sannadkan, waxay sii waday hoos -u -dhacdeeda, iyadoo dakhligu hoos u dhacay 69.63% oo lagu xisaabiyey 1.31% dakhliga guud. Laakiin Seagull Sumitomo ma sharxin sababaha hoos u dhaca dakhliga qaybtan.
Alaabta musqusha ee Seagull
Waxaa la fahamsan yahay in Seagull Sumitomo uu bilaabay diyaarinta 2015 si uu u galo garoonka musqusha ee caadada u ah. Meheraddu waxay hadda leedahay sumado sida Nestle iyo Frontier, iyo sidoo kale Qingdao, Suzhou, Zhuhai, Jiaxing iyo tiro saldhigyo wax -soo -saar oo caqli badan leh. Sanadihii la soo dhaafay, waxay sidoo kale heshay shirkado sida Jacopolo, Guangdong Nestle's, Champion Seagull iyo Datong Nai si loo xoojiyo ganacsiga rakibaadda oo dhan. Sumitomo seagull wuxuu ku sheegay warbixinta inay sii xoojin doonto musqulaha oo dhan caadadii si loo daboolo baahida loo qabo habaynta shaqsiga ee musqusha oo dhan. Waxay kaloo ballaarin doontaa meheraddeeda degsiimooyinka, ToC, EPC iyo xafiisyada ganacsiga.
Baaxadda suuqa ayaa gaari doonta 16.5 bilyan oo yuan, tartankuna wuxuu noqonayaa mid aad u kulul
Dhinac ayaa kordhay 370.95% halka dhinaca kalena uu hoos u dhacay 69.63%. Tan waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay kala duwanaanshaha waqtiga gelitaanka iyo qaabka horumarka iyo saldhigga horumarineed ee shirkado kala duwan, laakiin sidoo kale waxay ka tarjumaysaa loolanka ba'an ee warshadaha. Sida laga soo xigtay Ururka Dhismaha Qalabka Warshadaha ee Warshadaha ee Gobolka Guangdong laanta dhismaha ururka ayaa dhowaan sii daayay "warqadda cad ee horumarinta musqusha 2021", waxaa la filayaa in sannadka 2018-2025, guud ahaan suuqa dalabka musqusha (hoteel / guri / deggenaansho) uu ballaarin doono 1.6 bilyan yuan illaa 16.5 bilyan yuan, oo leh korodh sanadle ah oo isku dhafan oo ah 39.6%.
Ballaarinta suuqa, shirkado badan ayaa dardar geliyay soo -galitaanka. Bishii May ee sanadkan, Panasonic lagu soo bandhigay Bandhigga Jikada & Fayadhowrka Shanghai si loo abuuro badeecad musqusha oo dhan iyadoo lala kaashanayo Wishi Sumitomo, oo ay ku xigto sii deynta shan boos oo waaweyn, oo ay ku jiraan musqusha oo dhan. Bishii Ogosto ee sanadkan, Musqusha Hai Li soo dhaweeyey wefti ka socday New City Holdings, taas oo ka tarjumaysa wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa labada shirkadood. Waxaa la soo wariyay in hadda, dhammaan badeecooyinka musqusha ee Haili lagu meeleeyay dhowr mashruuc oo ka kooban New City Holdings sida Xi'an Fengshi Joy Mansion. Emperor Sanitary Ware's ganacsiga rakibaadda oo dhan ayaa sidoo kale si xawli ah u koraya. Ka sokow wada -shaqaynta qotada dheer ee ay la leedahay Hantida Mareykanka, waxay sidoo kale la gaartay iskaashiyo istiraatiiji ah in ka badan 20 shirkadood oo hanti ma guurto ah sida Evergrande, Poly, Vanke, Beyoncé iyo Zhonghai.
Shanta boos ee waaweyn ee uu sii daayay Panasonic waxaa ku jira dhammaan musqusha
Aragtida ayaa lagu ballaadhiyay barxadda shirka oo dhan. Shirkado badan ayaa iyaguna dhowaan ku tartamay qaab -dhismeedka iyada oo wax -iibsi iyo iskaashi- Shell Finder wuxuu damacsan yahay inuu ku bixiyo 8 bilyan yuan si uu u helo 100% sinnaanta Shengdu Home Furnishing. Jingdong 'Maalgashiga istaraatiijiyadeed ayaa dhowaan dardar geliyay dhammaan ganacsigii rakibidda ee Shangpinzha. Oppein waxay ku biireen gacmaha tiro ka mid ah shirkadaha rakibidda si ay u furaan qaab cusub oo “is -habeynta + shirkadaha rakibidda” si wada jir ah ugu guuleystaan ​​rakibidda oo dhan. Wadashaqaynta ka dhaxaysa Zbom iyo Hushang Minghu wuxuu raadinayaa inuu si degdeg ah u ballaariyo suuqa rakibaadda oo dhan. Markan ha oggolaado in suuqa rakibidda oo dhan uu noqdo gacalka caasimadda.
Marka la eego tartanka cad-kulul, waxaa la filayaa in xaaladaha ganacsi ee kala duwan ay caado noqon doonaan. Shirkad ahaan, waxaa muhiim ah in la joogteeyo joogtaynta horumarka. Waxaa laga yaabaa inay tahay tan ugu muhiimsan in la hubiyo wax soo saar joogto ah oo hoos imanaya suuqa ballaarinaya iyo in la is taago ka hor inta aan la istaagin.
Hore:: Toddoba Talooyin Si Looga Dhigo Musqusha Musqusha Next: Iftiinka Meesha Musqushaadu ma ku fiican tahay?
2021 / 09 / 28 366
2021 / 09 / 27 584
2021 / 09 / 25 549
2021 / 09 / 25 2134
2021 / 09 / 24 736
2021 / 09 / 24 631